Shirkii Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Arrimo kala duwan looga hadlay (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 18, 2018 2:05 g 0
Shirkii Khamiislaha ahaa ee Golaha Wasiirada Xukuumada dawladda Federaalka ah Soomaaliya, oo uu shir-guddoominayey Ra’iisu Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa lagu ansixiyey Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah, Tubta Siyaasada loo dhanyahay, islamarkaasna waxaa looga hadlay arrimo kale oo la xiriira amniga dalka iyo kuwoo kale.
Wasiirka Amniga iyo Wasiiru Dawlaha Gaashaandhiga ayaa ka warbixiyey xaalada Amniga Dalka oo ay sheegeen in howlgalo lagu sugayo amniga ay si xowli ah u socdaan islamarkaasna lagu guuleystey Labaatan ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ah in la soo qab-qabtay.
Dhankale Wasiiru Dawlaha Arrimaha Dibedda ayaa kawarbixiyey xaalada maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran India oo 43 ka mid ah xabsiga laga soo daayey oo dawladda Federaalku ay u diyaarineyso diyaarad lagu sooqaado si ay u yimaadaan dalkoodii hooyo. Sidoo kalena maxaabiista harsan ayaa la soodeyndoonaa bisha Febraayo. Dawladda ayaa ku dadaaleysa sidii muwaadiniinteeda ugu gurman laheyd.
Markii uu soo gaba gaboobay shirkii Golaha wasiirada Xukumada Fedraalka ayaa waxaa bahda saxaafada kaga war bixiyay shirkaas wasiirka warfaafinta C.raxmaan Cumar Cusmaan yariisow.
Falaanqeyn: Midoowga labada Maamul ee Galmudug & Ahlusuna muxuu ku dambeyn doona? (dhegayso)